Andron’ny 3 mey: mitaky fanaovan-gazety malalaka ny Amerikanina | NewsMada
Hentitra hatrany amin’ny fanambarany manoloana ny fanarahany ny zava-misy. Namoaka fanambarana ny eo anivon’ny masoivoho amerikanina, misahana an’i Madagasikara sy i Kaomoro amin’izao 3mey, Andro maneran-tany ho an’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety izao.
“Zava-dehibe ny asa fanaovan-gazety, malalaka sy mahaleotena amin’ny fanamafisana ny fahatokisan’ny vahoaka ny fitondrana ary amin’ny fampitana ny olan’ny vahoaka amin’ny manampahefana”, hoy ny fanambarana. Nanterin’ny Amerikanina fa ankalazaina amin’izao anio izao ny anjara toeran’ny asa fanaovan-gazety malalaka sy mahaleotena, izay tena mbola manandanja hatrany. Nanohy nitana andraikitra lehibe tamin’ny fiantohana ny mangarahara sy ny fampitam-baovao amin’ny olom-pirenena ary ny ady amin’ny fanapariahana vaovao tsy marim-pototra ny haino vaky jery teto Madagasikara sy tetsy amin’ny Nosy Kaomoro ary maneran-tany, nandritra ny ady amin’ny covid-19. “Mitana andraikitra lehibe amin’ny fotoanan’ny krizy, ary rohy mampifandray ny fanjakana rehetra sy ny vahoaka tompoin’izy ireo ny asa fanaovan-gazety malalaka sy mahaleo tena”, hoy ihany ny Amerikanina.
Famerana ny adihevitra…
Matoky i Etazonia fa zava-dehibe amin’ny fahombiazan’ny fiatrehana ny valanaretina ny fangaraharana sy ny tamberin’andraikitra avy amin’ny governemanta. “Hitanay ireo fanjakana nanao fanambarana hamehana sy namoaka lalàna hampanginana na hanenjehana ireo mpiasan’ny haino vaky jery, ny firaisamonim-pirenena, ny mpanohitra na ireo vondrona voailika”, hoy izy ireo. Teo koa ny manampahefana mampiasa lalàna momba ny fanalam-baraka mba hamerana ny adihevitra ampahibemaso, hanenjehana ireo mpanao gazety noho ny fitsikerana ny zava-bitan’ny governemanta, ary fanaovana tsindry ny haino vaky jery hanao sivana ny tenany, araka ny fanambarana hatrany. Matoky i Etazonia fa tokony hifantoka amin’ny fampiroboroboana ny mangarahara sy ny fiarovana ny fahasalamam-bahoaka ny fiatrehan’ny fanjakana ny covi-19. Mino koa izy ireo fa marin-toerana kokoa ny fanjakana, manohana firaisamonim-pirenena malalaka sy misokatra, miantoka ny zo hivory sy haneho hevitra am-pilaminana ary mamela ny hisian’ny fahasamihafan-kevitra mitondra fivoarana.